Ngwa ahia ahia 9 nyere gi aka imeputa ihe di nma n’ime Blog | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 27, 2019 Sunday, Jenụwarị 27, 2019 Becky Holton
Gịnị bụ isi nke ahịa ọdịnaya?
Ọ bụ naanị maka ịmepụta ọdịnaya dị ukwuu na ịkwalite ya n'ọtụtụ ọwa iji dọta uche ndị na-ege gị ntị?
Nke ahụ bụ akụkụ kachasị. Mana ahia ọdịnaya kariri nke ahụ. Y’oburu n’inweghi ike iji ihe ndia n’uzo, I gha enyocha ihe nyocha ahu, ig gha achota na ihe ndia adighi adọtara ndi mmadu.
Nkọcha nyochara ndị ahịa 1,000 iji chọpụta ihe nsogbu kasịnụ dị na ya bụ. Ndepụta nke nsogbu kachasị gụnyere ogo ọdịnaya, ịmepụta na ịbawanye ọdịnaya, mana ọ gara n'ihu.
Oge, karịsịa, bụ ihe ịma aka kasịnụ. Mana ndị ahịa jisiri ike na -emepụta echiche, onyinye, nkesa, atụmatụ, itinye aka na nkwekọrịta. Mgbe etinyere ihe ndị a niile na obere oge, anyị ga-enwe nsogbu.
Ya mere, anyị hụrụ na ire ahịa ọdịnaya, na isi ya, dị mgbagwoju anya karịa ọtụtụ n'ime anyị na-atụ anya ya. Kwesiri ịbanye n'ime uche na-arụ ọrụ nke ọma iji mezuo ebumnuche niile n'ime oge ị nyere.
Ngwaọrụ kwesịrị ekwesị na-enyere aka na nke ahụ!
9 Ngwa ahia ahia iji nyere gi aka imeri oge
Zute Edgar - wantchọrọ ilekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya blog dị ukwuu. Ọ bụrụ na mmadụ (ma ọ bụ ihe) nwere ike ilekọta nkesa ahụ, ị ​​ga-enweta oge buru ibu iji lekwasị anya na ihe ndị ọzọ ị ga - eme. Edgar bụ ngwa ọrụ ị chọrọ. You'll ga-ahazi posts na usoro ya, Edgar ga-edezi mmelite ọkwa maka Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram na Pinterest na-akpaghị aka. Ngwaọrụ ahụ dị mma maka ịmegharị ọdịnaya evergreen. Nke ahụ ga - eme ka akara gị gosipụta na ọ bara uru ọbụlagodi mgbe ị naghị ewepụta ọdịnaya ọhụụ oge ọ bụla ịchọrọ.
Quora - Mgbe inwere echiche maka isiokwu ị ga - eji dee ihe, ngọngọ onye edemede nwere ike iri oge. Ebee ka ị si enweta echiche ndị a? Nwere ike ịhụ ihe ndị asọmpi gị na-ede banyere ya, mana ị chọghị i copyomi ha. Nke a bụ nhọrọ ka mma: hụ ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ maka ya.
Lelee ajụjụ ndị dị na otu Quora dị mkpa, ị ga-enwetakwa echiche echiche ole na ole ozugbo.
Pablo - Ihe nlele nke ọdịnaya gị nwere ọtụtụ ihe. You'll ga-achọ eserese dị iche iche ma ọ bụ ihe onyonyo maka Facebook, Pinterest, Google+, Instagram na ọwa niile ọzọ ịchọrọ.
Na Pablo, akụkụ nke ọrụ gị dị mfe. Nwere ike ịmepụta ọhụụ mara mma maka ọkwa ọ bụla. Enwere ihe karịrị 50K na ọba akwụkwọ, yabụ ị nwere ike ịchọta nke dabara na ọdịnaya gị. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike hazie ha site na nkwuputa sitere na post ahụ, wee họrọ nha kwesịrị ekwesị maka netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche.
Hemingway App - N’ezie edezi oge na - ewe oge, ọ bụghị ya? Ozugbo imere ide blog, ị = chọrọ ịgafe ya ngwa ngwa wee bipụtara ya. Mana ị ga-etinyekwu uche na ọkwa nhazi; ma ọ bụghị na ị n'ihe ize ndụ na-ebipụta ezughị ezu drafts na-agbagwoju anya style.
Hemingway App na-eme ka akụkụ a nke ọrụ gị dị mfe dị ka ọ na-enweta. Ọ ga-ejide ụtọ asụsụ na nsụpe nsụgharị. Mana nke ahụ abụghị ihe niile. Ngwaọrụ a ga - adọkwa gị aka na ntị banyere mgbagwoju anya, okwu nkọwa, na ihe ndị ọzọ na - eme ka ozi ghara ịdị.
Naanị soro ndụmọdụ ndị ahụ ma mee ka ọdịnaya gị dị mfe ọgụgụ.
ProEssay na-ede ihe - Ngwaọrụ ndị edepụtara n’elu nyere gị aka ijikwa akụkụ dị iche iche nke mkpọsa ahịa ọdịnaya gị, mana kedu maka akụkụ ederede? Know mara na ị gaghị enwe ike ịdabere na ngwanrọ mgbe ọ bịara na nke ahụ.
Mana n'otu oge ma ọ bụ ọzọ, ị nwere ike ịrapara. Have nwere usoro nhazi nke akwadoro nke ọma mana ị nweghị ike ijikwa ide ihe niile n'oge. Ikekwe ị nọ n’etiti ebe mgbochi onye edemede. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị ndụ na-eme na ị ga-etinye ihe odide ahụ na ezumike.
N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọrụ ederede ọkachamara nwere ike inyere aka nke ukwuu. ProEssayWriting bụ ikpo okwu ebe ị nwere ike ịgbazite ndị edemede ọkachamara sitere na edemede dị iche iche. Ga-enye ha ntuziaka ma ha ga-ewepụta ọdịnaya 100% pụrụ iche site na njedebe gị.
Edemede Kacha Mma - Kacha mma Edemede bụ ihe ọzọ ukwuu reputable na-ede ọdịnaya ọdịnaya. Nwere ike ịnye iwu blog na isiokwu ọ bụla, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ewe ndị edemede site n'akụkụ dị iche iche nke ọmụmụ. Ederede kachasị mma dị mma maka akwụkwọ ọcha dị elu na eBooks, mana ị nwekwara ike ịnweta ọdịnaya dị mfe mgbe ọ bụla ịchọrọ ha.
Ọrụ a na - enye gị ohere idozi oge ga - adị mkpụmkpụ (site na ụbọchị iri ruo ụbọchị atọ), ma ị nweta nkwa maka nnyefe oge.
Akwụkwọ ndị ka elu - Ọ bụrụ n ’ị bu n’obi inyefe akụkụ idere ọdịnaya na ogologo oge, Akwụkwọ kacha elu bụ nnukwu nhọrọ. Mgbe ị na-ahọrọ Ruby ma ọ bụ Diamond otu, ị ga na-enweta ego na a mgbe niile. Na mgbakwunye, ị ga-arụ ọrụ na ndị edemede kachasị mma sitere na otu.
Ọ bụrụ n ’ịmalite iso onye ode akwụkwọ na - emekọrịta ihe masịrị gị, ị nwere ike ịgbazite otu ọkachamara ahụ ọzọ.
Na mgbakwunye na enyemaka ederede, Akwụkwọ kacha elu na-enyekwa ọrụ ndozi ọkachamara.
Ọrụ Brill Ọrụ Ederede - Nke a bụ ọrụ odide Britain. Ọ bụrụ na blog gị na ndị Britain na-ege ntị, onye edemede America agaghị enweta ụdị ahụ. N’ọnọdụ ahụ, Ọrụ Brill bụ nhọrọ kacha mma.
Ndị edemede na-ebute ọdịnaya dị elu na ụdị isiokwu niile. Na mgbakwunye na blọọgụ, ị nwekwara ike ịtụ ihe ọmụmụ, ngosi PowerPoint, mmemme ihe osise, na ndị ọzọ.
Edemede Australia - Edemede nke Australia bụ ụlọ ọrụ na-ede edemede dị ka ndị ọzọ ole na ole anyị kpọtụrụ aha n’elu. Ihe dị iche, dị ka aha ahụ n'onwe ya pụtara, bụ na ọ na-elekwasị anya n'ahịa Aussie. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ndị edemede si mba a ka ha see ụdị aka nri, ebe ahụ ka ị ga-ahụ ha.
Ọnụahịa ahụ adịworị ọnụ, mana ụlọ ọrụ ahụ na-enyekwa nnukwu ego maka ndị ọrụ oge niile.
Ichekwa oge bụ nnukwu ihe. Mgbe ị na-eme ka mgbasa ozi ahịa ọdịnaya gị na-arụpụta ihe, ị ga-amalite ịnweta okporo ụzọ ma mee ka ndị na-ege ntị kwenye ime ihe. Olileanya, ngwaọrụ ndị edepụtara n'elu ga-enyere gị aka iru ebe ahụ.
Tags: ihe odide Australiaedemede kacha mmammamiriọrụ ederede ederedecontent Marketingọdịnaya ahịa ahịaọrụ ọdịnayahemingway ngwazute edgarPabloakwụkwọ ndị ka elu
Becky Holton bụ odeakụkọ na blogger. O nwere mmasị na teknụzụ agụmakwụkwọ na ọ dị njikere mgbe niile ịkwado okwu na-enye nkọwa.